10 Di na nwunye a kacha acho | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Di na nwunye a kacha acho
Ihunanya, na-akpali akpali, n’akụkụ osimiri oftali, na French Alps n'èzí n'ọnụ ụzọ, ma ọ bụ ebe dị na China, ndị a n'elu 10 chọrọ di na nwunye njem ga-eju gị anya.
1. Di na nwunye kacha acho: Ihunanya City ezumike na Paris
Na mmụọ nsọ na nke kacha ihunanya fim, Paris bụ ọnọdụ kachasị nwee ịhụnanya maka njem di na nwunye nke Hollywood. Obodo kachasị nwee ịhụnanya, na otu n’ime ndị kasị njem na ụwa, ka na-abụ ebe kachasị achọ maka ndị di na nwunye.
Ọ bụrụ na ị nwere agụụ maka ihe niile French, patisserie, Ubi French, na maa mma alleys, mgbe ahụ ezumike obodo na Paris dị mma maka gị. Ọzọkwa, a ihunanya njem Paris bụ ihe kasị chọrọ ebe maka a di na nwunye na hụrụ splurging, na ibi la vie en bilie.
2. Kasị chọrọ di na nwunye Njem ka Italy: Amalfi Coast
Food, breathtaking echiche, na oké osimiri, mee ka osimiri Amalfi bụrụ otu ebe kachasị chọọ njem maka njem ndị di na nwunye. Lọ ndị mara mma na ọnụ ọnụ ugwu, okporo ụzọ, oké osimiri di kwa n'akuku gi, niile bụ ihe ndị ị chọrọ maka pampering di na nwunye’ ezumike.
Amalfi Coast na-bụ 50 kilomita nke oke osimiri mara mma, osimiri, na ebe obibi njem zoro ezo na echiche a na-agaghị echefu echefu. Nwere ike ịga ụgbọ mmiri, ma ọ bụ sunbathing, isi nri, ma ọ bụ iri nri n'otu n'ime ụlọ nri mara mma nke osimiri. Nhọrọ ndị dị na Amalfi Coast enweghị njedebe, ọbụna n’obere obodo ndị dị n’ụsọ oké osimiri Italiantali, naanị buru ghota!
3. Isle nke Skye, Scotland
Na nnukwu ugwu, ndise amam-ihe, na ọdịbendị na-adọrọ mmasị, Scotland bụ otu n'ime ebe kachasị mma n'ụwa. Isle nke Skye bụ otu n’ime mpaghara mara mma na Scotland, na ị ga-achọ ma ọ dịkarịa ala 2 izu iji nwee ọmarịcha ọtụtụ ọmarịcha mma ya.
Ma ị chọrọ inwe mmasị na echiche ahụ, ma ọ bụ chọpụta ya na ụkwụ na otu n'ime ọtụtụ ụzọ ụkwụ, Isle nke Skye bụ ihe ịtụnanya sitere n'okike. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ị bụ di na nwunye di na nwunye, mgbe ahụ ị ga-ahụ n'anya ịchọpụta ọdịdị ala nke Na-achọ. N'akụkụ aka nke ọzọ, i nwere ike inwe ụfọdụ ihunanya oge na Nwa mmụọ ọdọ mmiri, ma ọ bụ gaa na Dunvegan nnukwu ụlọ na ubi.
Yabụ, Isle nke Skye bụ ebe dị ịtụnanya maka njem ndị di na nwunye, ekele maka ugwu ugwu Scotland, ndagwurugwu, na ịtụnanya coastline. Ebe a, i nwere ike iji aka na aka, nanị nwee obi ụtọ na njem ahụ.
4. Di na nwunye kacha acho ndaghari njem na Switzerland
Na snowy ọnụ ọnụ, ahịhịa ndụ akwụkwọ ndụ, na ihe nkiri mara mma dị ka eserese, Switzerland bụ ihe ịtụnanya di na nwunye njem ebe. Di na nwunye a kacha chọọ njem na Switzerland bụ Zermatt, Rhine Falls, na ndagwurugwu Lauterbrunnen. Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya n'anya mgbe Zermatt bụ zuru okè skai ebe maka gị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ izu ike na ọnọdụ mara mma, mgbe ahụ Lauterbrunnen ndagwurugwu dị mma.
Switzerland nwere njedebe di na nwunye na-adịghị agwụ agwụ, ya mere, ọ dabere na ihe mgbaru ọsọ gị maka njem ịhụnanya. Nke ọ bụla, ị ga-ahụ ọtụtụ ihunanya tụrụ, nke abụọ honiimuunu, ma ọ bụ nanị n'ihi na unu chọrọ ịna-ahụrịta ibe unu n'anya, na oge pụrụ iche. Ya mere, it is really recommended to plan at least 7 ụbọchị njem na Switzerland.
Nnukwu nri, ikuku dị ịtụnanya, na ọtụtụ ebe ihunanya ihunanya. A njem Venice bụ na di na nwunye ọ bụla ndepụta ịwụ. Ọnụ ọgụgụ ndị njem nleta na-aga Venice kwa afọ pụrụ iche, ka o sina dị, ịma mma ya na ịma mma ya ga-ejide gị n'oge ọ bụla. N'ezie, ọ bụ nnọọ maa mma, na ị gaghị achọpụta onye ọ bụla, na dị nnọọ nwere ihe ịtụnanya oge na gị ihunanya getaway.
A njem Venice bụ otu nke n'elu 5 kasị chọrọ di na nwunye njem n'ihi na ọ bụ zuru okè n'ihi na a obere izu ụka. Obodo ahụ nwere ọtụtụ nlegharị anya, Nri Italian, na nhọrọ ụlọ obibi mara mma, yabụ ị ga-ahụ paradaịs na gondola. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị gbapụ ma na-achọpụta gburugburu Italian bara nnukwu uru mgbe ahụ Venice, ị nwere ike ịga na otu n'ime ọtụtụ ụbọchị njem site na Venice.
6. Ọtụtụ ndị di na nwunye achọrọ ịlụ: Ugwu French
Ijikọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na njem na ọnọdụ na Europe, jikọtara ya na French Alps, na ị nwere ihe kasị ihunanya di na nwunye’ njem. Typedị ebe a na-ama ụlọikwuu mara ụlọikwuu ma dị oke ọnụ karịa ebe obibi. Nịm ke ohia na ọmarịcha agwa, na echiche na-adọrọ mmasị banyere ugwu ugwu France.
Banye na bungalow nke gị, mma ụlọ, na-akpọte nnụnụ na-abụ abụ, inwe kọfị, ma na-aga njem ogologo site n'ọnụ ụzọ – akụkọ ifo. Mgbe ịhụnanya gị akwu n'ụzọ zuru ezu kwadebere, na ebe kachasị mma, don’tchọghị ihe ọ bụla ọzọ maka ezumike ịhụnanya na-agaghị echefu echefu.
7. Amsterdam: Ezumike ezumike ụlọ ezumike
Amsterdam bụ otu n'ime obodo ọchị na Europe maka ndị di na nwunye, na ọnụnọ ụlọ ụlọ bụ ihe kachasị emetụ n'ahụ na Amsterdam. Bogbọ mmiri ndị a bụ otu n’ime ihe oyiyi Amsterdam, ịpasa n'akụkụ ọwa mmiri. Otú ọ dị, ozugbo ị banyere, ị ga-ahụ ya nke ọma, chiri anya, ma chebe ya ka ìgwè mmadụ ahụ nwee mmasị na ọwa mmiri.
O doro anya, Amụma Amsterdam, ikuku, omenala, na mma masịrị di na nwunye si n'akụkụ ụwa nile. Ọzọkwa, echiche obodo na osimiri, ụlọ ahịa dị na mpio windo gị, gị ihunanya getaway ga-nrọ.
Nnukwu ahịa ahịa, maa mma Notting Hill, Kensington Gardens, ndị di na nwunye na-aga London bụ njem a na-agaghị echefu echefu. Obodo ahụ na-enye ọtụtụ ọrụ, yabụ ị nwere ike iche na ọ karịrị akarị maka inwe mmekọrịta ịhụnanya.
Ya mere, ọ bara uru ime ntakịrị nyocha, site na ebe kachasị mma, na ihe ndị ị chọrọ ime n'ezie. Yabụ, chịkọta ndepụta nke ahịa na ebe nkiri ịchọrọ ịga. Na mgbakwunye, hapụ ọtụtụ oge maka mmanya na ọtụtụ elu ụlọ Ogwe. Isi ihe dị mkpa nke njem a bụ ime ka mmekọrịta nwoke na nwanyị nwee mmekọrịta.
9. Kasị chọrọ di na nwunye Njem Na Italy: Wine Njem Na Tuscany
ubi-vine, ugwu ukwu silky, na Nri Italian, njem gaa Italiantali mmanya isi obodo dị na ndepụta ịwụ di na nwunye ọ bụla. Na-aga ije n'ubi vaịn, sipping si gị red wine, na-etinye obi na ikuku dị jụụ, n'ezie ị ga-ekwenye na Tuscany na-ada ụda Chineke.
N'ezie, Tuscany bụ otu n'ime ndị di na nwunye kachasị na-aga njem kwa afọ. Echiche anwansi na mmanya na-adọrọ di na nwunye si n'akụkụ ụwa niile, na-eme ka ha laghachi kwa afọ.
10. Di na nwunye kacha acho acho na China: Osimiri Yulong
China bu ebe di egwu, Osimiri Yulong bụkwa otu n’ime ebe ndị mara mma ma na-adọrọ mmasị. Osimiri Yulong bụ akụkụ nke Osimiri Li, ogologo na-adịghị agwụ agwụ, gbara ahihia ndu, obodo nta, na ubi osikapa. N'ihi ya, onga njem dị egwu n'akụkụ Osimiri Yulong bụ ahụmahụ anwansi.
Na mgbakwunye na eke mara mma, na Osimiri Yulong bụ ebe obibi nye ọtụtụ obodo nta na agbụrụ agbụrụ. N'ihi ya, ị ga-enwe ohere dị obere ịmụ banyere ụzọ ndụ na mpaghara Yangshuo, omenala, na art, dị ka ọ dị kemgbe ọtụtụ narị afọ.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi otu n'ime ndị a 10 di na nwunye choro otutu ndi njem.
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Kasị chọrọ di na nwunye Njem” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fmost-wanted-couples-trips%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#romance di na nwunye CouplesTrips RomanticCities RomanticEurope RomanticTrips RomanticViews